ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုပေးပို့လာသည့် အမည်စာရင်းကို လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ခြင်း – Yangon Hluttaw
Home / ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ၏ သတင်းများး / ကြေငြာချက်များ / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုပေးပို့လာသည့် အမည်စာရင်းကို လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုပေးပို့လာသည့် အမည်စာရင်းကို လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ခြင်း
Ygn Editor December 11, 2018	ကြေငြာချက်များ 67 Comments 915 Views
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၈)တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးရန္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၈၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္(၁)၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၁ နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၄၉ တို႕အရ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳေပးပို႕လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္စာရင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၁၊ နည္းဥပေဒခဲြ (က)နွင့္အညီ ေၾကညာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမည္ – ဦးလွေအး၊ အဘအမည္ – ဦးေမာင္စိန္၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ – ၁၂/ကမတ(နိုင္)၀၁၅၄၀၅ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႕ေဝထားျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၀ ပါ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း သက္ေသအထင္အရွားျပ၍ ကန္႕ကြက္လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရိွပါက ယေန႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ရပ္နားခိ်န္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္း ေပးပို႕ရန္ႏွင့္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၄ အညီ ပူးတဲြ တင္ျပရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈)တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၁ နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၉ တို့အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုပေးပို့လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်စာရင်းကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရယူရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၅၁၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က)နှင့်အညီ ကြေညာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အမည် – ဦးလှအေး၊ အဘအမည် – ဦးမောင်စိန်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၁၅၄၀၅ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ဖြန့်ဝေထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၀ ပါ သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းများနှင့် မပြည့်စုံကြောင်း သက်သေအထင်အရှားပြ၍ ကန့်ကွက်လိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက ယနေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ရပ်နားချိန်တွင် လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်း ပေးပို့ရန်နှင့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းများနှင့် မပြည့်စုံကြောင်း ခိုင်လုံသောသက်သေ အထောက်အထားများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၅၄ အညီ ပူးတွဲ တင်ပြရန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။
Previous ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၈)က်င္းပ
Next ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား
You actually make it appear really easy together with your presentation however I find this topic to be actually one
take the feeds additionally? I am happy to search out numerous helpful info right here in the put up, we’d like develop more
topics to write about for college essay write essays for money how to write the name ofasong in an essay
lrica without prescription in US
how to writeacharacter analysis essay college essay consultants how to write act essay 2016
can i get cheap lipitor in US
Hi, Neat post. There’s an issue with your site in internet explorer, might test this?K IE still is the marketplace chief andahuge component of other folks will leave out your magnificent writing due to this problem.
can i order cheap zantac in the USA
While I’m typicallyaRPG type of player, such as Skyrim and World of Warcraft, I’ve found Quake Live to beagood multiplayer shooting game. For those who love the thrill of fighting and combat, Quake Live will rank high as one of the best multiplayer games on the PC. However, for players who aren’t into that genre, it may fall flat. More Minecraft(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, smartphone)The most popular video game in the world allows groups of eight players to meet online, explore vast blocky worlds and construct amazing buildings together. Think of it asacross betweenaLego set andafantasy adventure. You and your friends could collaborate onaproject вЂ“ such as buildingascale model of the Taj Mahal вЂ“ or play one of the competitive mini-games. ItвЂ™ll keep you occupied for months. http://doma-iz.ru/user/p4knncg685 Storytelling has becomeasignificant part of the video game industry. These days, most big single-player titles put plenty of focus on their narratives. However, cooperative adventures havenвЂ™t always been given the same treatment. Yes, there are some fantastic co-op experiences out there, but not many tellacompelling story. This is especially true for split-screen titles. Halo: The Master Chief Collection Enter the world of The Master Chief and battle across the stars in one of the biggest ever first-person shooter franchises. Drop into the campaign or instant matchmaking across Halo CE, Halo 2, Halo 3, and Halo 4. The collection features new customizable options, new seasonal and weekly challenges, and new game modes, all with PC settings and optimizations such as 4K, mouse and keyboard support, and 60+ FPS.
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru) Хвороба ще називається лускатим лишаєм і точна її етіологія невідома. Псоріаз — хронічне захворювання, що вражає не тільки статеві органи, але й інші ділянки тіла. Супроводжують недузі поява маленьких прищиків і висипань, утворення лусочок, печіння, свербіж, почервоніння ураженої шкіри, поява кров’янистих крапель з пошкоджених покривів. Найчастіше псоріатичні прищі виникають при наступних обставинах: назад к оглавлению Здравствуйте! Папе 67 лет. Сделали операцию на правой сонной артерии каротидную эндартерэктомию. После операции врач назначил гепарин, кеторол и не назначил антибиотики, стоит ли настаивать на назначении антибиотиков. Второй вопрос, можно ли спать на правом боку, и чего стоит избегать, чтобы не было осложнений в послеоперационный период? http://msdiscgolf.com/2018/community/profile/nelsontjv134459/ Даем гарантии на качество препаратов на качество препаратов Круглосуточный Ваш браузер устарел! Пожалуйста, обновите ваш браузер чтобы использовать все возможности сайта. Круглосуточный Таблетки для эрекции и продления секса. Госпитализация по ОМС: Указанный прайс носит информационный характер, не является офертой и не содержит полный список предоставляемых услуг. Цены соответствуют проведению конкретной манипуляции. Полную стоимость той или иной услуги озвучит специалист после проведения осмотра и консультации. Госпитализация по ОМС: